တောင်ငူကြံ့ဖွတ်ဘာလဲ..စာပေဟောပြောပွဲဘာလဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » တောင်ငူကြံ့ဖွတ်ဘာလဲ..စာပေဟောပြောပွဲဘာလဲ…
Posted by nyeinchan on Jan 21, 2012 in Think Tank | 10 comments
ပရိတ်သတ်တွေကြား အရမ်းထင်ရှားနေသူ၊ အခု ကြံ့ဖွတ်စာပေဟောပြောပွဲတောင်ငူမှာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ.လာပြီး ဘာတွေများပြောဦးမှာလဲ ။
သိပြီးလာမှာလား၊ မသိဘဲလာမှာလား ။ ဘယ်လိုတန်ဖိုးမျိုးပေးရမယ်ဆိုတာတော့ ဟောပြောပွဲပြီးမှ သိချေမယ်တကား…….
၂။ ဆရာဖေမြင့်……………………ရဲရဲတောက်အမှန်သတင်းတွေ၊ သမာသမတ်ကျတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ အယ်ဒီတာ့အမှာတွေကို ပြည်သူအကြိုက်
အန်တီစုအကြောင်းသတင်းတွေ ၊ မောင်းဆက်ရဲ.NLD အောင်နိုင်ရေးဆောင်းပါးတွေ ၊ အနှစ်သာရရှိတဲ့ ပြည်သူ.အတွတ် ” ပြည်သူ.ခေတ် ” ဂျာနယ်မှာ လက်သံ
ပြောင်ပြောင်ရေးသားသူ အခု ကြံ့ဖွတ်စာပေဟောပြောပွဲတောင်ငူမှာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ.လာပြီး ဘာတွေများပြောဦးမှာလဲ ။
၃။ ဆရာမသန်းမြင့်အောင်………………………အခုထိ အဖိနှိပ်ခံ နေရဆဲ လူမှုရေးကူညီမှုအသင်းကြီးရဲ. ခေါင်ဆောင်မှု၊ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဦးကျော်သူနှင့်
သွေးသောက်လိုလက်ချင်းတွဲပြီး ကြုံဆုံလာသမျှ တစ်ဖက်အဖွဲ.အစည်းရဲ. မတရားသဖြင့် ကန်.သတ်နှိပ်ကွပ်မှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံအံတုလို. မြင့်မြတ်သော ပြည်သူအကျိူးပြု
လူမှုအောက်ခြေသိမ်းလုပ်ငန်းတွေကို ထောင်မကြောက်တန်းမကြောက် အံ့လောက်အောင် စွမ်းဆော င်နေသူ အခု ကြံ့ဖွတ်စာပေဟောပြောပွဲတောင်ငူမှာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ.လာပြီး ဘာတွေများပြောဦးမှာလဲ ။ သိပြီးလာမှာလား၊ မသိဘဲလာမှာလား ။
ဘယ်လိုတန်ဖိုးမျိုးပေးရမယ်ဆိုတာတော့ ဟောပြောပွဲပြီးမှ သိချေမယ်တကား…….
၄။မောင်သာချို ၊ ဦးဘုန်း နှင့် ဒီမိုကရေစီချစ်ပြည်သူများ အကြိုက် ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထအောင် ဟောပြနိုင်သော စာရေးဆရာများ ( မှတ်ချက် ။လယ်တွင်းသား
စောချစ်နှင့်ငြိမ်းမင်း မပါ) …………………အခု ကြံ့ဖွတ်စာပေဟောပြောပွဲတောင်ငူမှာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ.လာပြီး ဘာတွေများပြောဦးမှာလဲ ။
၅။ တောင်ငူကမောင်ဆွေ ဆိုသူနှင့်ကာတွန်းဆရာများဆိုသူများ………………….တကယ်ရှိမရှိမသိသော ထာဝရဂရုဏာရှင်သွေးလှုအသင်း အမည်ဝှက်နှင့် အမည်ရင်း မဖော်ဝံ့သော ကြံ့ဖွတ်က ရောင်းရင်းကြီးများ ဘယ်လိုရည်၇ွယ်ချက်နှင့် စာပေဟောပြောပွဲအမည်ခံပြီး ဘာတွေဘော်ချက်ကြမလဲ ၊ ဘာအကျိုးအမြတ်တွေ
ကောထွက်လာမလဲ၊ ဘယ်လိုတန်ဖိုးမျိုးပေးရမလဲဆိုတာတော့ ဟောပြောပွဲပြီးမှဘဲ သိချေမည်တကား။
##မှတ်ချက်။ ။အခမဲ့ကြော်ငြာပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစုံတရာ တုံပြန်သံများကို အသေအချာကိုမျော်လင့်ပါသည်။
###### စောစီးစွာ မလာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး တုံပြန်သွားသူ ဆရာမောင်ဝံသအားလေးစားစွာ အနူးအညွှတ် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပေအံ့#####
has written 1 post in this Website..
View all posts by nyeinchan →
မောင်ဝံသ ပြောသလို…သွားမနေကြနဲ့ ဗျာ
အလုပ်မရှိရင် အိမ်မှာ ၀တ္ထုဖတ်ပြီး ဇိမ်ယူနေလိုက်.
သွားဖြစ်တဲ့လူကလဲ ဘာထူးလဲ သတင်းပို့ ပါဦး
စာပေဟောပြောပွဲပါ လူပုဂ္ဂိုလ် ပါတီစွဲမထားပါနဲ့ ။ကြံ့ခိုင်ရေးက ဘဲလုပ်လုပ်၊ဘယ်ပါတီကဘဲလုပ်လုပ်
အကောင်းမြင်နားထောင်ပေးလိုက်ပါ။မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ သွားမနေတော့နဲ့ ပေါ့။ကျေးဇူးပါဗျား။
ကျွန်တော်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး ..
ဘာဖြစ်လို့ ကိုမရေးပဲနဲ့ ပိုစ်တက်သွားလဲ ပြောလို့ရရင် ပြောပေးပါလားဗျာ ..
မှော်ဆရာတောင် သည်မျက်လှဲ့ကို နားမလည်ပေဘူးတဲ့ မင်းကြီးများ။
သူကြီးရေ ရှင်းပေးပါအုံးဗျ။ ဘာတွေ မှားနေတာလဲ။ ငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့ Account ပွင့်နေလို့သူများဝင်ရေးသွားတာလား။ hack လုပ်တာခံရတာလား။ အောက်မှာ ငြိမ်းချမ်း comments မှာ “ဟေဟေ့ ဟေဟေ့”ဆိုတာ လုပ်သွားသူက ရေးထားတာလား။ လုပ်ပါအုံး။ hack ခံရတယ်ဆိုရင်လည်း ဆာဗာကနေမဟုတ်လောက်ဘူး။ Browser ကနေဖြစ်နိုင်သည်။ စာရေးသူများ ဆိုင်တွင်အသုံးပြုပါက Browser ၏ Saved Password များကို ပြန်ဖျက်ပြီးမှထွက်သင့်တယ်.
တယောက်ယောက်က.. အကောင့်ယူသုံးသွားတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါကြောင်းနဲ့.. မကြာခင်ပို့စ်ကို ဖျက်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်း…။